ကိုယ်ဝန် Archives - BuzzFeed Myanmar
(၂၁)ယောက်မြောက် သမီးလေး ကိုယ်ဝန် လွယ်ထားပြီဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်ရဲ့အကြီးဆုံးအိမ်ထောင်စု
ဗြိတိန်ရဲ့အကြီးဆုံးမိသားစုကြီးဟာ မိသားစုဦးရေ ထပ်မံတိုးလာဦးမယ့် အလားအလာမှာ ရှိနေပါတယ်။အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စူးရက်ဒ်ဖို့ဒ်က သူမမှာ (၂၁)ယောက်မြောက်ကလေး ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် မိခင် နေရာရောက်လာတော့ အမေကို ပိုချစ် ပိုဂရုစိုက်ဖြစ်လာတယ် ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်
“သက်မွန်က နဂိုကတည်း အမေကို အရမ်းချစ်တဲ့သူ။ ပိုခင်တွယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်နေတော့ အခုချိန် ကိုယ်ကိုတိုင် မိဘနေရာရောက်လာတော့ အမေ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ဝေဒနာတွေအကုန်လုံးကို အတိကျ အသေးစိတ် ခံစားပေးလို့ရနားလည်ပေးလို့ရတယ်။ အဲ့အတွက် အမေ့ကို ပိုပြီးချစ်လာတယ်။ ပိုပြီးတော့ ဂရုစိုက်ဖြစ်တယ်” လို့မိခင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ ခံစားချက်လေးကို Duwun Media သို့ ပြောပြပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ပဲ ချစ်တင်းနှော နိုင်ဖို့
လာပြီလေ။ ကလေး မလိုချင်ဆေးမသောက်ချင် ဒါလေးဖတ်ဦးနော် ချစ်သူ ရည်းစား တွေ Living Together နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်သည် ဇနီးမောင်နှံ တွေ ကလေး မလိုချင်သေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တားဆေး တစ်စုံတစ်ရာမသောက်ပဲ ကလေးမရအောင်လုပ်ချင်ကြမှာပါပဲ။ တစ်ချို့တွေအတွက်ကြတော့လည်း မိန်းကလေး က ရောဂါ အခံရှိနေတော့ ဆေးဝါး တွေသောက်သုံးလို့ အဆင်မပြေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကဲ အခုတော့ ဒီလို မိန်းကလေး မျိုးတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ့်နည်းလမ်းတွေ ဖော်ပြပေးပါတော့မယ်။
ကိုယ်ဝန် ဘာလေးမွေးမလဲဆိုတာ မိကျောင်းကို အသုံးပြုပြီး ထူးဆန်းစွာခန့်မှန်းပြခဲ့သူ
လူဝီစီယာနာရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ဇနီးဖြစ်သူကိုယ်ဝန်က ယောက်ျားလေးလား မိန်းကလေးလားဆိုတာ ခန့်မှန်းဖို့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မိကျောင်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ မိကျောင်းဆရာ Mike Kliebert နဲ့ ဇနီးတို့က သူတို့မွေးလာမယ့်ကလေးက ဘာလေးလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းတဲ့ပွဲသို့ အသိမိတ်ဆွေတွေကို ဖိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းမှာ ဘာလေးမွေးမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းဖို့ ရောင်စုံစက္ကူတွေ ကိတ်မုန့်တွေ သုံးလေ့ရှိပေမယ့် ဒီစုံတွဲကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းထွင်လိုက်တာပါ။
ကိုယ်ဝန် ရှိပေမယ့် အကယ်ဒမီပေးပွဲတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အဆိုတော် သဇင်
အဆိုတော်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သဇင်ကတော့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကို တက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လာမယ့် ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကို သဇင်တစ်ယောက် ခရမ်းရောင်ပုံစံလေးနဲ့ တက်ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိတ်ကပ်ပုံစံကိုလည်း ပြောင်းထားပြီး တွေ့နေကျသဇင်နဲ့တော့ အနည်းငယ်ခွဲထွက်ထားပါတယ်။
တားဆေးသောက်ဖို့ မေ့သွားရင် …ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?? ဘာဖြစ်တတ်လဲ?
မနက်ခင်းမှာ သုတ်သီးသုတ်ပြာနဲ့ တားဆေးသောက်ဖို့ မေ့သွားဖူးပါသလား။ခရီးသွားချိန်မှာ ဆေးထည့်ဖို့ မေ့ပြီး 1 ပတ်လောက် ဆေးမသောက်ဖြစ်တာလား။ဒါမှမဟုတ် ဆေးရပ်ပြီး ကလေးရဖို့ ကြိုးစားနေတာပါလား။ဘာကြောင့်ပဲ ပျက်သွားပျက်သွား၊ နှစ်နဲ့ချီပြီး ပုံမှန်သောက်နေတဲ့ဆေးကို တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မေ့ပြီး မသောက်မိတာမျိုး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
သင် သူမနှင့်အတူမအိပ်ခင် ဒီစာလေးအရင်ဖတ်ပေးပါ
ခုချိန်မှာ သူမဟာ သင့်ရဲ့အိပ်ရာထက်ဝယ်။နောက်ဆုံးတော့ သူမကို သင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီပေါ့။သင် သူမရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ကူညီပြီး ချွတ်ပေးတယ်။သင့်ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကိုလည်း သင်ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။သင် သူမရဲ့ကောက်ကြောင်းအလှကို ခံစားတယ်။သင်လိင်ဆက်ဆံဖို့ စတင်ပြင်ဆင်နေပြီ။ဒါပေမယ့် ခဏလေး သင်လိင်ဆက်ဆံဖို့မကြိုးစားခင် ခဏလေးပဲ ကျေးဇူးပြုပြီး အောက်ပါမေးခွန်းအချို့ကို သင့်ကိုယ်သင်ဆန်းစစ်ပြီး အရင်ဖြေကြည့်ပါအုံး။
ရိုးရိုးမွေးမည့် မိခင်လောင်း များအတွက် မွေးဖွားရလွယ်ကူစေမယ့်နည်းလမ်းများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများအနေနဲ့ ကလေးကို ရိုးရိုးမွေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင် လွယ်ကူစွာနဲ့ နာကျင်မှု အသက်သာဆုံးဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်း ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပေးရင် မွေးဖွားရလွယ်ကူစေပြီး မိခင်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကို ကျန်းမာစေပါတယ်။
သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသွားသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကလေးထွက်ကျ
ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း နခွန်းရတ်ခ်ျဆီမားခရိုင်ထဲမှာ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဦး ကလေးမွေးဖွားလိုက်ပါတယ်။
အဓမ္မပြုကျင့်မှု တစ်ခု ကြုံရတဲ့အခါ
အဓမ္မပြုကျင့်မှု တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ဖို့ (Prevention) နဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ရင် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ (Response) ဆိုတဲ့ အပိုင်း၂ပိုင်းရှိပါတယ်၊၊ ကာကွယ် ဖို့ဟာ လတ်တလော အနေအထား အရ ခက်ခဲနေသေးတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကိုယ်ဝန်ရတာလို၊ ရောဂါပိုးတွေကူးစက်တာလို နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ တွေ ဖြစ်မလာအောင်တော့ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်၊၊အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူတစ်ယောက်မှာ ဘာလိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသလဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။